Ivontoerana fampianarana fiteny roa | Ivontoerana fitenin'ny fiteny any Houston hatramin'ny 1982
Famintinana amin'ny fandaharana
Intensive anglisy Program
Fampihenana ny lojika
Anglisy ho an'ny tanjona manokana
Tsindrio eto raha hanolotra tolotra manokana
Mianara amin'ny fomba milamina sy mahomby ny teny anglisy.
Sakafo hariva ho fanasoavanao.
Tsy mbola tara raha mianatra teny espaniola!
Amin'ny BEI, miara-miasa aminao izahay mba hampivoatra ny fahaizanao sy manatsara ny baikon'ny teny anglisy mba hahombiazanao kokoa amin'ny fiainana. F-1 Tonga soa ny mpianatra!
Ataovy lafatra ny fahaizanao anglisy ary hahay hifanerasera tsara sy milamina miaraka amin'ny fahatokisan-tena. Lohahevitra sy lesona anglisy indrindra amin'ny fiainana anglisy ho an'ny anglisy ilainao.
Manjary mora mivarotra eny amin'ny toeram-piasana! Mandehana miaraka amin'ny tebiteby kely rehefa afaka mifandray amin'ny mponina ao ianao! Ny fampianarana anay dia natao hanomezana anao fahaiza-manao fiteny izay azonao hampiasaina.
Avia ho namanay!
Tena i Amerika tokoa no tanin'ny fahafaha-manao, ary eo amin'ny BEI, izahay dia misahana ny fanatanterahana izany fotoana izany.
Ianao ve liana amin'ny fangatahana visa visa ho an'ny mpianatra? Te hanova ny sata maha-firenena anao any Etazonia ve ianao hianatra manontolo andro? Te-hamindra ny rakitsoratra I-20 ho any BEI ve ianao?
Fiofanana amin'ny orinasa
BEI dia nanampy ireo fikambanana isan-karazany ara-kolotsaina nandritra ny 38 taona mahery mba hamolavola ny fahaizan'ny mpiasa manerantany.
Manana filana manokana amin'ny fiteny ve ianao? Ny programa manokana dia namboarina sy namboarina manokana ho anao! Mianara amin'ny tsirairay, miaraka amin'ny namanao, na amin'ny vondrona kely.
Serivisy sosialy fialokalofana
Aty BEI, fikambanana iray manerantany isika, izay misolo tena ny firenena avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao amin'ny traikefa fianaràna tsy manam-paharoa tsy mitovy amin'ny hafa. Eto ianao dia hahazo tombony amin'ny fandaharam-pianarana ambony noho ny fandaharam-pianarana feno izay hanomana anao tanteraka amin'ny fiainanao vaovao any Etazonia.
Miaraka amin'ny mpiara-miasa ato amin'ny anjerimanontolo dia afaka mamonjy ny tenanao sy ny fandaniana amin'ny fanadinana TOEFL ianao. Ny fahombiazan'ny fandaharana amin'ny fiteny dia hahamora anao ny fisoratana anarana rehefa mianatra miaraka amin'ireo mpiara-miasa ao amin'ny kolejy malaza izahay. Hitsamby mandritra ireo ora rehetra handalinana amin'ny fanadinana TOEFL ary mahitsy mankany am-pianarana!
BEI dia nanompo ny fokonolona mpitsoa-ponenana tao Houston, am-polotaona maro. Ny serivisy fanabeazana ho anay dia manan-danja mba hanomezana fahefana sy hanomezana ireo mponina vaovao manana fahaiza-manao anglisy hitety ny tranony vaovao. Mampianatra ny mpianatsika isika mba hatoky sy ho be herim-po na dia manatsara ny fahaizany mifampiresaka.
Amin'izao tontolo izao sahirana izao, tsy voatery manana fotoana sy fahaizana manao azy ao an-dakilasy ianao. Izany no antony mahatonga anao ao an-dakilasy ho anao, miaraka amin'ny lalam-pianarana an-tserasera izay natao manokana hanomezana torolàlana manokana amin'ny fampiononana ny tranonao. Mifandraisa amin'ny mpampianatra sy mpiara-mianatra aminao raha manatsara ny fahalalanao sy manitatra ny répertoire anao.
Fisondrotana fialantsasatra 2021
Novambra 21, 2021 Tolotra manokana
Manokana Novambra 2021
Novambra 2, 2021 Tolotra manokana
Fampiroboroboana ny Halloween 2021
Oktobra 13, 2021 Tolotra manokana
ALATIANA NY TOETRA!
Septambra 13, 2021 Vaovao
6060 Richmond Avenue, NY
© Copyright 2021 Institiota Fampianarana Bilingual